Huawei: Sida loogu isticmaalo istixmaalka batteriga ku jira Android Pie | Androidsis
Sida loo isticmaalo istiraatiijiga batteriga ee Huawei oo leh 'Android Pie'
Eder Ferreño | | Batariga, Khiyaamada Android
Telefoonada Huawei ee cusbooneysiiyay ama leh Android Pie asal ahaan, waxaa laga helaa xulashooyinka maareynta batteriga kala duwan. Iyaga ayaa mahad leh, waxaa suurtagal ah in taleefanka laga helo adeegsi fiican markasta. Wax caawimaad fiican u noqon kara xaaladaha uu batteriga ku yar yahay taleefanka. Hal dariiqo oo dheeri ah oo lagu habeeyo isticmaalka EMUI, jaakada sumadda Shiinaha.
Isticmaalidda ku-habboonaanta batteriga ee Huawei ee EMUI iyo Android Pie waa mid aad u fudud, laakiin aad u faa'iido badan. Tan iyo markii dhinac laga eego, waxaan leenahay dhowr hab keydinta tamarta, dheeri ku ah midka aan caadiyan ku haysanno Android. Marka isticmaaleyaal badan oo wata taleefanka Huawei waxay noqon kartaa ikhtiyaar wanaagsan oo laga fiirsado.
1 Hagaajinta batteriga ee Huawei
2 Hababka keydinta awoodda
Hagaajinta batteriga ee Huawei
Doorashadan ku habboon batteriga waa wax lagu soo bandhigay Android Pie, oo leh horumarinno gaar ah. Goobaha taleefanka ee Huawei waxaan ku leenahay suurtagalnimadaan, qaybta batteriga. Waxa la qabanayo markaan adeegsanayno howshan ayaa ah inaan raadino geedi socodka qaarkood ee hada taleefanka ku shaqeeya, oo aan laga yaabo in waqtigaas aanu wax badan noo tarin, laakiin waxay ku cunayaan awood aaladda.
Sidan oo kale, hababka iswaafajinta otomaatiga ah, tusaale ahaan, waa la jari karaa, iyagoo naga caawinaya inaan taleefanka ku keydinno tamarta. Kaliya waa inaan gujino ikhtiyaarkaas oo aan u oggolaanno inaan bilowno raadinta wixii geeddi-socod ee aan xiri karno xilligaas. Dhowr ilbiriqsiyo ka dib, waxay na tusi doontaa xulashooyinkaan shaashadda oo markaa dooran karnaa hababka aan dooneyno inaan xirno
Taariikhda madow ma caawisaa badbaadinta nolosha batteriga ee Android?
Waxay ku saabsan tahay hab fiican oo lagu keydiyo batteriga taleefanka, iyada oo aan loo baahnayn hababka tamarta keydinta ee la heli karo. Ficil ku habboonaa Android Pie waqti ka dib oo aan ugu raaxeysan karno taleefanka Huawei qaab fudud.
Hababka keydinta awoodda
Telefoonada Huawei ee leh Android Pie waxay leeyihiin awood koronto oo kala duwan ama qaabab keydinta awooda. In Android Oreo horeyba waxaa u jiray dhowr habab oo la heli karo, kuwaas oo hadda loo kordhiyay seddex wadar ahaan. Waa xulashooyin taxane ah oo naga caawin doona yareynta isticmaalka iyadoo kuxiran xaaladda. Waxaan marka hore kuu sheegeynaa wax badan oo ku saabsan seddexdan qaab iyo waxa ay qabtaan:
Habka waxqabadka ugu badan: Kani waa qaab aan bixinayn keyd, laakiin wuxuu dhaqso u isticmaali doonaa batteriga. Thanks to qaabkan, waxaan ka dhigeynaa taleefanka casriga ah ee Huawei inuu ku shaqeeyo waxqabadka ugu sareeya ee suurtogalka ah. Awooddeeda ayaa loo kordhiyay ugu badnaan, taas oo sababi karta in taleefanka uu kuleylka xitaa si xad dhaaf ah u kululaado. Waa qaab aan isticmaali karno haddii aan ciyaarno Fortnite, tusaale ahaan.
Qaabka badbaadinta tamarta: Qaabka keydinta tamarta caadiga ah, sidoo kale wuxuu ku jiraa Android Pie. Markaan isticmaalno qaabkan, taleefanka ayaa xiri doona howlaha qaar. Waxay mas'uul ka tahay xaddidaadda dhaqdhaqaaqa taleefanka ee gadaasha, curyaaminta iswaafajinta otomaatiga ah, yaraynta saameynta muuqaalka iyo ka saarista dhawaaqyada nidaamka. Waxaa loo isticmaali karaa markii hooseeya, laakiin boqolkiiba ku filan ay sii jiraan in muddo ah.
Habka keydinta awoodda Ultra: Awood aad u xoog badan oo keyd ah, taas oo taleefanka uu yareynayo waxqabadkiisa ugu badnaan, isagoo u daayay kaliya dhowr codsi oo shaqeynaya. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu waco loona diro SMS, iyo wax kale oo yar. Tani waa ikhtiyaar aan u weecano markaan wax yar oo bateri ah naga harno oo aan dooneyno inaan yareyno isticmaalka ugu badnaan. Waxay u maleyneysaa in nolosha batteriga ay saddex laabmay marka loo eego qaabka caadiga ah ee taleefanka.
Noocyada baytariyada ee telefoonada Android
Sidaa darteed, waxay kuxirantahay xaalada aan kujirno, waan awoodnaa isticmaal mid ka mid ah qaababkan badbaadinta awoodda taleefankayaga Huawei oo wata Android Pie. Sidaa darteed, haddii aan aragno inaan ku yar nahay baytariga, marwalba waan u jeesan karnaa si aan xoogaa yar u xoqno Gaar ahaan haddii saacado badan ay dhaafi doonaan ilaa aan markale lacag ka qaadi karno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo isticmaalo istiraatiijiga batteriga ee Huawei oo leh 'Android Pie'
Facebook ayaa bilaabi kara cryptocurrency sanadkaan
Asus ZenFone 6 wuxuu helayaa cusbooneysi cusub oo leh casriyeyn weyn oo kamarad ah